Useful Tips on How to Write a Motivation Letter |
Location: musha » Kutumira » Guestpost » Mazano Anobatsira eKunyora Tsamba Yekukurudzira
Mazano Anobatsira eKunyora Tsamba Yekukurudzira
Kana iwe uchishuvira kuwana bhezari uye kuwana mukana wekujoinha yunivhesiti kana chirongwa chechiroto chako, unofanirwa kuziva kunyora tsamba yekukurudzira.
Maitiro Ekunyora Tsamba Yekukurudzira Kuti Utore Scholarship
Munyika yanhasi, mavara ekukurudzira makiyi anogona kukuvhurira mikova yakawanda. Chidimbu chakanyorwa zvakanaka uye chekugadzira chinogona kunyengetedza mushandirwi, maneja weHR, kana mutungamiri wepurojekiti kuti iwe ndiwe wakakodzera mumiriri wechinzvimbo. Kana ukafunga kunyorera chirongwa chekufunda, unofanirwa kusanganisira tsamba yakadaro mune yakajairwa seti yemagwaro. Nenzira yakadai, kuti chikumbiro chako chibvumirwe, unofanirwa kuziva kunyora tsamba yekukurudzira uye kudzidza matipi kubva kunyanzvi dzepamusoro dzinomiririra yakavimbika sevhisi.
Chii Chinonzi Tsamba Yekukurudzira?
Mune akawanda mazwi ekutanga, tsamba yekukurudzira itsamba yekuvhara inofanirwa kuverengerwa mune yekufunda kana basa rekushandisa package. Inotevera zvinangwa zvikuru zviviri:
Kunyengetedza muverengi kuti sei iwe uri mumiriri akanakisa;
Kutsanangura zvinangwa zvako zvekupinda yunivhesiti kana kujoina kambani.
Ichi chidimbu chekunyora ndicho chakakosha zvikuru. Kazhinji, mabhodhi ekubvumidzwa anopfupisa rondedzero yevanonyorera nekutora pamusoro pekunyorera nemabhii ekukurudzira chete. Zvakadini nevamwe vose? Hapana! Bhodhi rinongopfuudza vamwe vachakwikwidza. Kana iwe uchida kuzviita kune pfupi pfupi, gadzira inoshamisa uye inobata-inobata chirevo chako uye uiendese nefomu rekunyorera.
Kana iwe ukanyorera dhigirii-level kudzidza, tsamba yekukurudzira inofanirwa. Zvakafanana zvirongwa zveBachelors zvinoda kuti mudzidzi aendese bepa rakadaro, zvakare. Kana iwe usingazive kana kuisa tsamba yekukurudzira mukunyorera application kana kwete, mhinduro inogara yakafanana, "Ehe, unofanirwa!" Iwo mukana wakasarudzika wekufadza komiti yekuongorora uye kuhwina mashoma ekuwedzera mapoinzi.
Ichi chinyorwa chinokurukura maitiro ekunyora tsamba yekukurudzira kuti uwane bhezari kukoreji kana kuyunivhesiti yezviroto zvako. Asi ngatitange kubva pakutanga!
Danho 1. Sarudza Format
Tsamba yekukurudzira inotevera chimiro chezvikamu zvitatu, sechinyorwa. Unofanira kunyora mitsetse mishoma yesumo mundima yokutanga, tsanangura chinangwa mune yechipiri, uye kupfupikisa nyaya yacho yose mundima yokupedzisira. Neimwe nzira, iwe unogona kunyora mukuyerera. Uku kunyora kwakashata kunogona kukukanganisa. Tsamba yakadaro inogona kufinha uye kuvhiringa muverengi.
Tsamba Yekukurudzira yeMashanu-Manomwe Ndima:
Iwe unogona kuronga tsamba yako yechinangwa mundima shanu kusvika kunomwe. Iyi fomati ndiyo inonyanya kushanda. Inobvumira kupa pfungwa dzako nenzira ine musoro uye inonzwisisika. Zvakare, unoda ndima imwe yesumo uye ndima imwe yokugumisa. Dare rinofanira kugadzirisa chinangwa chega chega chekunyorera mundima yakaparadzana. Funga nezvemuganhu. Iwe unofanirwa kupinza pfungwa dzako dzese mundima shanu.
Danho 2. Brainstorm
Iwe unofanirwa kunzwisisa zvakajeka WHO iyo bhodhi yekubvumidzwa iri kutsvaga. Tevere, iwe unofanirwa kuita chinangwa chekuzviongorora kuti uone kana uchienderana nemufananidzo wemunhu akakwana kana kwete. Hurukuro yepfungwa inogona kubatsira. Unogona kutokoka shamwari kana munhu waunovimba naye uye anoziva nezvehunyanzvi hwako, hunhu hwako, budiriro yedzidzo, uye budiriro yehunyanzvi. Pachirongwa, unogona kushandisa mibvunzo inotevera:
Ndeipi kosi yaunoda kusarudza?
Kosi yakasarudzwa ingakubatsira sei mukuita zvirongwa zvako zvenguva refu?
Sei uchida scholarship?
Chii chinoita kuti uve mumiriri akasiyana?
Chii chawawana kusvika parizvino?
Ndeupi mupiro wamakaita kusvika parizvino?
Chii chauchaita kana chikumbiro chako chekufunda chikabvumidzwa?
Kudzidzira kungakubatsira sei kuzadzisa zvinangwa zvako?
Kudzidzira kungakubatsira sei iwe kubatsira munharaunda?
Nhanho 3: Yekutanga Haisi Yakanakisa: Shanda neDrafts
Kana iwe uine ruzivo rushoma rwekunyora, funga kuti iyo yakaoma dhizaini yaunonyora yekutanga haifanirwe kuendeswa. Hausi mutemo wakaoma asi mutemo unozviratidza wega. Kupa bepa kutarisa kwechipiri kunogona kukubatsira kuti unzwisise kuti inofanira kuchinjwa sei. Kana iwe uine mukana wekuvandudza tsamba yako, ingoishandisa. Zvinogona kubatsira kutora zororo, vhiki kana maviri, usati wadzokera kuchinyorwa. Iyi nguva pfupi inobvumidza iwe kumutsiridza simba rako uye kudzokera pakunyora tsamba yako yekukurudzira nesimba idzva. Vimba manzwiro ako uye pfungwa dzako. Pakupedzisira, kunyora tsamba yekukurudzira kune zvese nezve art uye kurudziro. Zvinokwanisika kuti iwe unogona kunyora zvinyorwa zvitatu kana kupfuura usati wauya nechidimbu chakakodzera. Zvakare, chinyorwa chekutanga hachifanirwe kuendeswa. Ndizvo zvazvinoita. Pane kudaro, inofanira kuvandudzwa.
Danho 4: Rova Chiyero
Chimwe chikanganiso chakajairika kuedza kupinza hupenyu hwako hwese muchinyorwa chipfupi chakadaro. Iwe unofanirwa kunzwisisa zvakajeka kuti hazvina kuoma asi hazvigoneke. Hupenyu hwako hwakakura kudarika peji rimwe. Kuti udzivise kushushikana uye kuvhiringika, edza kuona zvakakosha zvakanyanya mubiography yako. Vanogona kubatsira bhodhi rekugamuchira kuti rinzwisise kuti ndiwe ani uye zvaungaita. Tsamba yako inofanira kuva inonzwisisika uye yakajeka. Iva akatendeseka uye iwe pachako asi usaende kunoshamwaridzana. Tsamba yako inofanirwa kuratidza hunhu hwako, hunyanzvi, zvishuvo, uye hunyanzvi, pamwe nekugona kufunga kunze kwebhokisi, gadzira, uye kuongorora. Funga nezvechiitiko chimwe chinoshandura hupenyu uye gadzira nyaya. Kubata chiyero hakusi nyore. Pedza nguva yakakwana uchifunga nezvechirongwa chepepa.
Danho 5. Nyora Mhedziso
Ndima yekupedzisira yetsamba yako yekukurudzira inofanirwa kupeta nyaya yese. Mukupedzisa, iwe unofanirwa kusimbisa nyaya huru uye kupfupisa zvinangwa zvako zvehunyanzvi uye zvirongwa. Pano, zvingava zvakakodzera kutora mufananidzo wakajeka weramangwana rako. Stress zvakare nei iwe uchida iyo scholarship, iyo yaunonyorera. Iwe unogona kuvaudza chimwe chinhu pamusoro pebasa rako rekurota. Iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti ichi chinyorwa chinogona kukuvhurira mikana yakawanda yedzidzo.
Danho 6: Verenga, ongorora, natsiridza; Dzokorora
Padanho rekupedzisira, unofanirwa kukwenenzvera tsamba yako yekukurudzira. Zvakare, unogona kukumbira vashoma shamwari, vezera, kana vaunoshanda navo kuti vatarise pabepa. Mhinduro yavo inogona kubatsira kuvandudza bepa zvakazara. Kuwanda kwaunoita vanhu, ndiko kuwedzera mikana yauinayo yekubvisa zvikanganiso zvese. Iwe unogona uye unofanirwa kushandisa otomatiki spellcheckers (anenge mashoma) asi iwe unofanirwa kuziva kuti havagone kubata yese kukanganisa. Zvakare, havakupe maonero emunhu. Pamusoro pazvo, urikunyorera vanhu kwete michina. Bvunza vaverengi kuti vagovane zvavanofunga nezvetsamba yako. Bvunza kuti vakakutenda here kana kuti kwete, kuti musoro nemashoko anga akajeka here kana kuti kwete, uye kuti vakaona chero clichés kana kusarerekera. Vabvunze pamusoro pechinhu chisina kusimba chepepa.
Usatya mhinduro dzisina kunaka. Inogona kuva inonyanya kubatsira. Nenzira yakadai, unogona kuona zvese zvisina simba zvinongedzo uye wozvivandudza. Pakupedzisira, vabvunze kana vara racho richinzwika serinozivikanwa kana kuti kwete. Kana mhinduro iri 'Hongu,' tine dzimwe nhau dzakaipa. Zvinoreva kuti watadza kuratidza hunhu hwako. Hapana kuvhunduka! Hapana chakarasika! Unogona kuvandudza tsamba uye kuita kuti ive yakakwana.
Tinovimba kuti mushure mekuverenga chinyorwa ichi, iwe unonzwisisa kunyora tsamba yekukurudzira. Iye zvino, iwe unogona kuzviita! Rombo rakanaka!
Spotify kukwidziridzwa ndiyo goridhe nyowani!